थाहा खबर: महेश बस्नेतको चेतावनी : साइबर सेनाले प्रचण्ड–माधवलाई तह लगाउँछन्
पाल्पा : नेकपाका युवा नेता महेश बस्नेतले ओली पक्षका साइबर सेनाले प्रचण्ड र माधव नेपाललाई तह लगाउने चेतावनी दिएका छन्।
शनिबार तानसेनमा आयोजित ओली पक्षीय कार्यकर्ता भेलामा बस्नेतले यस्तो जवाफ दिएका हुन्। शुक्रबार काठमाडाैंमा प्रचण्ड र नेपाल समूहले आयोजना गरेको विरोध सभामा नेकपा नेता घनश्याम भूसालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका युवालाई 'साइबर स्याल'को संज्ञा दिएका थिए।
सामाजिक सञ्जालमार्फत सूचना सम्प्रेषण गरेर सुझाव दिने युवालाई 'साइबर स्याल' भन्नुले सम्पूर्ण युवाको अपमान भएको उनले गुनासो गरेका हुन्। प्रचण्डले युवालाई संगठित गर्ने नाममा वाइसिएल बनाएर आपराधिक कार्यमा जोडेको बस्नेतले बताए। ‘
प्रचण्डले युवालाई आपराधिक काम बाहेक केही सिकाएनन्’, उनले भने, ‘ओली पक्षीय युवाले नेपाली जनता र राष्ट्रको हितमा काम गरेका छन्। गरिरहने छन्। राष्ट्र र राष्ट्रियताको हितविपरीत काम गर्ने जो कसैलाई छाड्ने छैनन्।’ यी युवा साइबर सेना भएर खबरदारी गर्ने उनले बताए।
माधव नेपालले विगतमा पार्टीलाई लुलो बनाएको उनले बताए। अहिले प्रचण्डले धुलो बनाउन खोजिरहेका बस्नेतले आरोप लगाए। यी दुई नेताले व्यक्तिगत पदका स्वार्थ पूरा गर्न पार्टी एकताको बहाना बनाएको उनले बताए। ४ महिनापछि हुने महाधिवेशन र २ वर्षमा हुने निर्वाचन पर्खन नसकेका नेता प्रचण्ड माधवले पार्टी विभाजन गरेको आरोप बताए।
विपक्षी दलसँग मिलेर आफ्नै पार्टीबाट बनेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वास ल्याउने र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध महाअभियोग लगाउने षडयन्त्र आत्मघाती भएको बस्नेतले बताए।
त्यसको परिणामस्वरुप संसद विघटन भएको छ। ५ वर्ष संसद चलाउन चाहने तर संसदको दुइ तिहाइ बहुमत सदस्यबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनु खोज्ने किन? उनले प्रश्न गरे।
'पदीय स्वार्थभन्दा अरु केही होइन्। आमालाई बचाउने त्यही आमाबाट जन्मिएको छोराछोरीलाई घाँटी निमोठेर मार्ने यो भन्दा ठूलो अपराध के हुन सक्छ? केपी ओलीले के अपराध गरेका थिए?,' उनले भने,' जनता न्यायाधीश भएका र निर्वाचनमार्फत जनताको मत लिएर पदमा बस्न पनि उनले चुनौती दिए। उनले निर्वाचनबाट भागेर अन्त कतै जाने ठाउँ नभएको समेत बताए।
महिला हस्तकला मेला फागुन २२ देखि २४ सम्‍म हुने
निर्देशन कार्यान्वयन गराउन संसदको क्रियाशीलता जरुरी : अध्यक्ष तिमिल्सिना